China Pharmaceutical Giredhi Gelatin fekitori uye vagadziri | Yasin
Gelatin yakaratidza kuita kwayo kwakawanda mukushandisa kweindasitiri yemishonga uye mushonga. Iyo inoshandiswa kugadzira makobvu emakomputa akaomarara uye akapfava, mapiritsi, granulation, makenduru anotsiva mishonga, zvekudya / zvekuwedzera zvehutano, manyuchi uye zvichingodaro. Inonyanya kugaya uye inoshanda seyakasarudzika ekudzivirira emishonga. Nekuda kwekukura kwehutano kuziva uye kuwedzera kudiwa kwezvigadzirwa zvehutano, pane chakakwirira chinodiwa chekuchengetedza gelatin uye uye yakasimba chishuwo chegadziriro yekugadzira. Ndozvatinogara tichichengeta nekuvandudza.
Jelly Simba Bloom 150-260Bloom
Viscosity (6.67% 60 ° C）) mpa.s .52.5
Kujeka mm 500
Kufambisa 450nm % ≥50
Yese Hutachiona Hwekuverenga CFU / g ≤1000
Gelatin inoshandisa nzira yayo yemishonga kune ese gelatin anoshandiswa akapfava gelatin makapisi, angave emishonga, ezvehutano, ekuzora kana ependi-bhora kushandisa. Isu tinofunga ipapo kunyorera zvakaenzana zvinoda uye nekunyatso sarudza gelatin kuti ipe inowirirana kudzokorora kugona.
Gelatin R&D Center yanga ichidzidza iyo gelatin application mune yakapfava capsule kwemakore mazhinji uye yawana ruzivo rwakakura uye kugadzirisa mhinduro mhinduro, kunyanya mukudzivirira kusangana nechero ipi yeanoshanda zvigadzirwa, kudzivirira mhedzisiro yekukwegura, kuomesa uye kubuda.
Mune akaomesesa macapuleti, gelatin inopa yakasimba uye inoshanduka faira yeiyo tamper-yakajeka fomu. Iyi gelatin yakagadziridzwa kusangana neyakaomarara parameter.
Kunze kwechitarisiko chakajeka, pasherufu-hupenyu hwezvinhu zvedu ndeyakarebesa muChina; hapana chikonzero chekuwedzera chero chekuchengetedza nemutengi wedu kana Yasin Gelatin inoshandiswa pasi peGMP yekugadzira nharaunda.
Yasin Gelatin inosangana nemhando yepamusoro musimba uye kunyanya zvinodiwa zvemishonga senge izvo zvinotsanangurwa neUSP, EP kana JP.
Mumatafura, Gelatin ndeyechisikigo inosunga, yekumhara uye yekuparadzanisa mumiririri inosangana nezvinodiwa zveavo vatengi vane hanya nezvekushandiswa kwemakemikari akashandurwa zvigadzirwa. Kana ichipa mahwendefa kutaridzika uye muromo unonakidza unonzwa.